Ururada shaqaalaha xaruumaha guud: waxaa xirfadeena afduubey dhaqaaloyahanada iyo maamulayaasha - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ururada shaqaalaha xaruumaha guud: waxaa xirfadeena afduubey dhaqaaloyahanada iyo maamulayaasha
La daabacay tisdag 25 juni 2013 kl 14.06
"Waxaa la doonayaan in la kordhiyo wax soo saarka oo la cabiro waxa la cabirikaro"
"Hayaddaha howlaha guud ee dadweynaha waxaa afduubey dhaqaaloyahanada iyo maamulayaasha kuwaas oo ugaarsi ugu jira dheef iyo natiijo dhaqaale". Sidaas waxaa wargeyska DN debatt asbuucaan gudahiisa ku qorey gudoomiyaasha ururada shaqaalaha ee kala ah ururka macallimiinta, booliiska iyo ururka dhaqaatiirta.
Bo Jansson gudoomiyaha ururka iskutaga macallimiinta "lärarnas riksförbund" ayaa aaminsan in nidaamka maamul ee hada lagu hago xaruumaha holwlaha guud kaas oo loo yaqaan New Public management uu yahay mid uu ka buuxo araktiyo siyaasadeed oo aan u hiilineynin hanaanka daryeelka iyo nabadgeliyada.
- Erey bixintaas waxaa loo isticmaalaa marka howlaha guud loo maamulo sida in ay yahiin urur shirkadeed. Si kasto ha ahaato araktida siyaasadeed ee arintaan ka danbeyso, xaalado waa sidaas maanta. Waxaana taas laga dheehan karaa maanta iskuulka, ayuu yeri Bo Jansson.
Nooca maanta loo hago xaruumaha arimaha guud ayaa ah nooc ay ka buuxdo shaqo dheeraad ah oo lana xirirara arimaha maamulka taas oo maanta ka badan sidii ay waagii hore ahaan jirtey. Qorayaasha waxey ku tilmaameen howlahaas sii batey in aysan u keenin tusaale booliska in uu qabto shaqo wanaagsan ama daryeel wanaagsan iyo tacliin siin wanaagsan. Balse arinta ay taas soo kordhisey ay tahay keliya arimo la xiriira dhanka aan wanaagsaneyn sida tusaale in iskuulka maanta noqdey suuq tartan loogu jiro oo ahmiyadii kala wareegtey shaqadii abaabahinta iyo waxbaridda. Sida uu yeri Bo Jansson uruka macallimiinta. ILL: [Duration:0:16]
- Howlaha macallimiinta waxey noqdeen kuwo ku badan dhanka diiwaangelinta iyo maamulka taas oo waqtiga kala wareegtey arimahii kale ee mahiimka ahaa sida hor-u-marinta tacliinta ardeyda, ayuu yeri Bo jansson.
Sidoo kale dhanka daryeelka ayaa waxaa waqti dheer ka socdey doodo la xiriira isla dhibkaas. Tusaalahii ugu danbeeyey ayahaa baaqyo codsi jeedin ahaa oo ka soo bilaabmey norrbotten oo ku faafey dalka oo dhan taas oo ku sabsanaa calaa-waal ay dhaqaatiirta muujinayeyeen. Dhaqaatiirta ayaa baaqooda ku sheegey in dhaqaatiirta Iswedhen ay waaqti aad u yar la qaataan bokaanka marka loo fiiriyo guud ahaan Yurub. Lollo Makdessi waxuu kamid yahay dadyowga ka bilaabey baqaayada noocaan ah magaalada Stockholm, mar uu u waramayeyna laanta P1 Morgon ee ka baxda Sverigesradio waxuu sheegay in aysan aheyn baahida bokaanka waxa haga xaruumaha caafimaadka dalkaan Iswedhen. [Duration:0:14]
- Waxaa markasta la doonayaan in la kordhiyo wax soo saarka oo la cabiro waxa la cabirikaro sida warshadii oo kale, halkey ahaan la heyd in laga duulo daryeel caafimaad oo ku dhisan bini'aadenimo, ayuu yeri.
Lena Nitz, oo ah gidoomiyaha ururka shaqaalaha booliiska "polisförbundet" ayaa ayadana waxey bixineysaa tusaale la xiriira sida ay booliska u shaqeeyaan marka ay kontoroolayaan gaadiid waddayaasha ay uga shakiyaan in ay qamri cabsanyahiin. "Halka ay ahaan laheyd in booliska istaago waddooyinka ay ku tuhmayaan in dadyowga cabsan gadiidka ku waddaan, waxaa la istaagaa wadooyinka waaweyn si loo buuxiyo tirokoob la xiriira inta wadayaal gaadiid oo la kontorooley".
Sadexda urur shaqaale ayaa hada ugu baaqey dowladda iyo mucaaradka in ay arintaan wadohadal ka sameeyaan. Waxeyna doonayaan in dowladda dhageysto oo aaminto qiimeynta dadyowga ka howlgala sadexdaan xirfadeed.
-Marka macallimiinta, dhaqaatiirta iyo booliska dareemaan in kaalintooda meesha laga saarey oo kaalinta xifadyahanada qiimo beesho markaas waxaan dareemeynaa xirfaddeena ay qatar ku sugantahay, waxaana dooneynaa in aan ilaalsano, waxaan siyaasiinta looga fadhiyaa in ay na dhageystaan. Ayuu yeri Bo jansoon gudoomiyaha ururka iskutaga macallimiinta.
Reporter: Warsame Elm & Alberico Lecchini